Umkhiqizi nomhlinzeki we-USB C Car Isitolo esidayisa yonke impahla | BWOO
Ishaja yemoto ye-USB C
• Ukusekela ukushaja okusheshayo kwe-PD 18W
• Isikhunta sangasese se-BWOO esinomklamo oyingqayizivele
• Usebenzisa okokufaka umlilo
• Kungasetshenziswa kumadivayisi eselula amabili ngasikhathi sinye
• Ngokukhanya kwenkomba yokushaja
Ishaja yemoto ye-BWOO USB C yefoni ephathekayo
I-BO-CC58 yisikhunta sethu sangasese esine-Type C ne-USB port, isekela i-PD 18W ukushaja okusheshayo, kufakazele impendulo enhle evela emakethe, i-USB port isekela i-2.4A output max, singashaja amadivayisi amabili weselula emotweni ngokusebenzisa i-CC58 PD Car Charger, njalo gcina ifoni yethu ephathekayo isikhunta sokushaja okuphephile.
Ukucaciswa Kweshaja ye-12V ye-USB C
PD USB C Ishaja yemoto
PD 18W + 5V / 2.4A
ABS + PC Ukuvimbela umlilo
Thayipha u-C + USB
Ukuvikelwa okuzungezile konke kuqinisekisa ukuphepha
Ukushaja Okusheshayo Izithombe ze-USB C Car Charger
Ishaja yemoto ye-BO-CC58 ye-USB C inosayizi omncane, ephathekayo futhi engasindi ngaphandle kokuthatha isikhala, isebenzisa impahla yokuhlola umlilo ye-PC ukuqinisekisa ubude bayo.
Ukuvikelwa okuningi kwe-smart chip, ukuvikeleka okuzungezile ngaso sonke isikhathi kugcina amadivayisi wethu weselula kusikhunta sokushaja okuphephile, uhlobo lwe-usb c ishaja yemoto ingumlingani wethu ohamba phambili ohambweni lokuphila.
Ishaja yemoto esheshayo engu-30W ekhiphayo nge-USB 2.0 ne-Type C port, ukukhanya kwesikhombi sokushaja.
Ubuningi / ibhokisi
Ibhokisi lezipho eliqinile elinewindi
Ziyini izinzuzo zamashaja ezimoto?
1. Uma ungabhemi, ishaja yemoto ingayisebenzisa ngokuphelele i-idle cigarette lighter interface ukuhlinzeka ngamandla okushaja kwefoni yakho ephathekayo noma eminye imikhiqizo eyidijithali!
2 .Uma ubhema, ishaja yemoto ingangena kusixhumi esibonakalayo sogwayi nganoma yisiphi isikhathi, ukuze ukwazi ukubhema osikilidi abambalwa futhi ugcine ikhwalithi yomoya emotweni!
3. Uma kuqhathaniswa ne-inverter enkulu futhi engazinzile yemoto, ishaja yemoto incane ngosayizi, ayihlali ndawo emotweni, inesimiso esilula sokusebenza, futhi iyabiza.
4. Ezimotweni ezifakwe i-USB interface emotweni yokuqala, i-USB interface yezimoto eziningi empeleni yakhelwe ngokuya ngamazinga wokudluliswa kwedatha futhi ayinakho ukusebenza kokuphakelwa kwamandla; noma ngabe ezinye izixhumi zemoto ze-USB zinomsebenzi wokuphakelwa kwamandla, kuyinto ejwayelekile I-500mA yamanje ayigculisi ngokuphelele ukukhokhiswa kwe-iPhone noma amanye amadivayisi wedijithali amakhulu asikrini esikhulu. Noma ingakhokhiswa, kuzothatha isikhathi eside ukuyikhokhisa. Kufana nokusebenzisa ishaja ye-iPhone ukushaja i-iPad. Ayikwazi ukukhokhiswa ngokuphelele ngosuku olulodwa. Lolu hlobo lokushaja nakanjani alwanele kulesi sikhathi esifushane lapho usiya noma ubuya emsebenzini.
5. Thatha i-iPhone4S ngomthamo webhethri ka-1430mAh njengesibonelo. Kuthatha kuphela cishe amahora angu-1.5 ukushaja nge-1A yamanje. Noma isikhathi sokukhokhisa esifakiwe sifakiwe esigabeni sakamuva, kumahora ama-2 kuphela. Ingathola i-40-50 ngokusebenzisa ishaja yemoto isigamu sehora emgwaqeni. Cishe amaphesenti kagesi anele ukubhekana nokusetshenziswa ebusuku. Ngakho-ke, uma ufuna ukuvuselela izingcingo zakho ezahlukahlukene usendleleni evela emsebenzini, ishaja yemoto enesibonisi esikhanyayo sogwayi esinganikeza nge-1A noma ngaphezulu kwamanje yisinqumo sakho esingcono kakhulu!
Langaphambilini Ishaja Yesikhungo Semoto Yesibili
Olandelayo: I-earphone enezintambo ezingama-41 ye-iphone
Ishaja Yemoto ye-Android
Car Ishaja yeselula
Ishaja Yemoto Yeselula
Ishaja yemoto eyi-Dual Usb
Ishaja Yemoto Esheshayo
Ishaja Yemoto Ye-iphone
Ishaja Yemoto Magnetic
Ishaja Yemoto Engenantambo yeMagnetic
Multi Car Ishaja
Multi Port Car Ishaja
Ishaja yemoto ye-Multi Port Usb
Ishaja Yemoto Ephathekayo
Uhlobo C Car Ishaja
Isb Car Car Ishaja
Ishaja ye-Usb C esheshayo yemoto
Isb Car Ishaja
Ishaja yemoto engenantambo
I-Mount Car Ishaja Engenantambo
ishaja yemoto eminingi ye-USB
Ishaja yemoto ephindwe kabili ye-USB
ishaja yefoni engenantambo yemoto
Ishaja Yesikhungo Semoto Yesibili